A na -emepe ụlọ ngosi ihe ọhụrụ nke oge a (Moco) na Barcelona
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » A na -emepe ụlọ ngosi ihe ọhụrụ nke oge a (Moco) na Barcelona
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Entertainment • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ebe ngosi nka Moco na -eweghara oghere nke Palacio Cervelló, bụbu ebe obibi nke ezinụlọ Cervelló a ma ama ruo narị afọ nke 18.
Ụlọ ihe ngosi nka nke oge a (Moco) na -ekwughachi usoro ihe ngosi nka yana Barcelona, ​​Spain.
N'ịgbaso ọganiihu ya na Amsterdam, Moco na -ekwughachi nkwa ya n'igosipụta ọrụ ngosipụta nke ndị omenkà ama ama n'ụwa na kpakpando na -ebili.
Ebe ngosi nka Moco ga -emepe ọnụ ụzọ ya na 16 Ọktoba 2021 na 16th narị afọ Obí na etiti obodo.
The Ụlọ ihe ngosi nka nke oge a (Moco) na -ekwughachi usoro ihe ngosi nka yana Barcelona, ​​Spain. Na 16 Ọktoba 2021, Moco Museum Barcelona mepere ọha ọha ọnụ ụzọ ya, na -akara akara ọhụrụ maka ebe ngosi nka nwere onwe.
Ọgbara ọhụrụ & nka
Ịga nke ọma ya Amsterdam, Moco na -ekwughachi nkwa ya n'igosipụta ọrụ onyonyo nke ndị omenkà ama ama n'ụwa na kpakpando na -ebili. Moco Amsterdam mbụ mepere ụzọ ya n'April 2016. Taa, Moco Museum Amsterdam anabatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ abụọ si na mba 2 dị iche iche. Maka ọtụtụ ndị ọbịa, Moco bụ ebe ntinye ụwa nka. Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị na -ege ntị sara mbara na -eleta anyị ma hụ nka n'anya na nke mbụ.
Moco Barcelona nwere ọrụ nka sitere na Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & More! Ihe omumu ihe omimi dijitalụ sitere na teamLab, Les Fantômes, na Studio Irma.
Ihe ngosi pụrụ iche:
Esplendor de la Noche by Guillermo Lorca: Moco na -egosi ihe ngosi solo nke mbụ nke Europe site n'aka onye omenkà Chile dịkọrọ ndụ n'ihe ngosi nke na -agwakọta anwansi na eziokwu. Ọ bụ Simon de Pury, onye na -ere ahịa akụkọ mgbe ochie, onye na -ere ahịa nka na otu onye ama ama na ụwa nka.
Otu Lab: Igwe onyonyo imikpu dijitalụ
Oghere ngosi ngosi raara onwe ya nye mbụ na Europe na ihe ngosi NFT.
Ihe ngosi nka Moco Barcelona
Emi odude ke c / Montcada 25 na Barcelona. Ebe ngosi nka Moco na -eweghara oghere nke Palacio Cervelló, bụbu ebe obibi nke ezinụlọ Cervelló a ma ama ruo narị afọ nke 18. Site na emepechabeghị emepe ruo afọ 20th Ọtụtụ narị afọ, ndị aristocrats, ndị ahịa na ndị otu ezi na ụlọ eze jidesiri saịtị a mere eme ike. Site na nkwanye ugwu dị ukwuu maka ụlọ dị ugbu a, Studio Pulsen weghachiri ihe mbụ Palacio Cervelló - na -emegharị maka mkpa nke Moco Museum iji mepụta nnukwu ohere ọgbara ọhụrụ.
Nweghara oghere a na -egosipụta atụmatụ mbụ nke Moco, mgbe ọ weghaara oghere nke Villa Alsberg (b. 1904) na Amsterdam - ụlọ echebere maka ndị isi nwere ohere. Ọzọkwa, ebe ngosi nka Moco na -agbanwe ike nke oghere pụrụ iche iji nabata mmadụ niile. Agbanyeghị, Amsterdam adịla obere iji gosipụta nrọ anyị niile na -enweghị atụ, oghere oghere anyị dịkwa oke. Enwere ọtụtụ nka anyị chọrọ ịkekọrịta yana ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ ị ga -akọ.
Eji ọgwụ jikwaa ime ime onwe ya ugbu a ọ dị mma